Previous Article A Chụọla Ndị Ọrụ NECO dị Iri Asaa Maka Asambodo Adịgboroja
Next Article Narị Abụọ na Iri Anọ na Otu (241) Ụmụ Akwụkwọ UI Nwere Kụlasị Mbụ
N'okwu ya na mmemme ahụ, onyeisi NLN, bụ Ọkammụta Lenrie O. Aịna kwụrụ na ya bụ atụmatụ nkwalite agụmakwụkwọ bụ nke weere ọnọdụ na steeti niile dị n'ala Nigeria, ma sịkwa na ebumnobi ya bụ ime ka ọhaneze ghọta mkpà ịgụ akwụkwọ dị, ya na ikesàrà ụmụ mmadụ ihe dị iche iche e ji akwàlite mmụta, site na njikọ aka nke òtù dị iche iche nakwa ndị ọzọ e ji okwu ha agba ìzù.
Ka ọ na-akọwa na atụmatụ ahụ nke ahọ a wèèrè ọnọdụ n'ụfọdụ obodo mepetụrụ emepe n'ala Nigeria; Ọkammụta Aịna, nke ọ bụ osote ya, bụ Oriakụ Gloria Okeagụ nọchitere anya ya na mmemme ahụ, kwùrù na ánaghị agụ akwụkwọ oge niile na-eme ka mmadụ bụrụ ìtì bọrịbọ ma nọrọkwa n'ọnọdụ ihe ízè ndụ na onye ụwa na-atụ n'ọnụ, ọbụnadị dịka ọ dụzịrị ndị ahụ bịara ya bụ mmemme ka ha malite ụbọchị ahụ gụsibe akwụkwọ ike ma werekwa mmụta kpọrọ ihe.
Na mbụ n'okwu ya, onyeisi ngalaba ọba akwụkwọ ala Nigeria dị n'Enugu, bụ Oriakụ Neboh Rachael Ify kwùrù na e guzobere ya bụ atụmatụ iji kwalite mmụta n'ogoogo ndụ mmadụ ọbụla, n'agbànyèghị ahọ ole onye dị, ọkwa onye ji maọbụ ihe onye na-arụ; ma kwuo na nke ahụ na-enyekwa aka n'ụzọ pụrụ iche ime ka mmadụ pụọ n'ọnọdụ ihe ízè ndụ, ndaghachi azụ, ụbịam, ụbụrụ mkpọchi nakwa ihe ndị ọzọ dị otu ahụ.
Ka ọ na-akọrọ ha akụkọ ọgbụgba ama ihe ịgụsi akwụkwọ ike mègòrò na ndụ ya, onyeisi ọba akwụkwọ steeti Anambra, bụ Dọkịta Nkechi Udeze gwàrà ndị bịara mmemme ahụ, nke ọ ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha bụ ndị okenye, ka ha gharakwa ikwe ka ihe ọbụla mee ha ka ha kwụsị ịgụ akwụkwọ maọbụ hụtaba ịgụ akwụkwọ dịka ihe dịịrị naanị ụmakwụkwọ, ụmụaka na ndị ntorobịa. O mere ka a mara na ịgụ akwụkwọ bụ ihe dịịrị onye ọbụla, n'ihi ọtụtụ urù nke ahụ na-eweta, n'agbanyeghị ahọ ole onye dị; ma chètàkwara ha na ọ bụ ụbọchị mmadụ kwụsịrị ịgụ akwụkwọ ka ụbụrụ na-amàlitere ịkpọchi.
Na nzaghachi na ozi ekele ya, eze ọdịnala Ebenebe, bụ Igwe Chris E. Nnaegbuna (JP) kèlèrè ndị ahụ maka iburu ya bụ oke mmemme nke ahọ a wee bịa obodo ahụ, ma kelekwa aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Obianọ maka ezi agbambọ ya n'ịkwàlìtè ezi ọnọdụ mmụta na steeti ahụ.
Ọ kpọkùzịkwàrà ndị bịara ya bụ mmemme nakwa ọhaneze ka ha were nkuzi dị iche iche e neyere na ya bụ ọgbakọ wee kpọrọ ihe, site n'ịmalitezị ugbua gụba akwụkwọ oge ọbụla, iji wee rite úrù so ya, ma sikwa n'ụzọ dị otu ahụ gbanahị ọghọm dị iche iche dị na mmadụ agụghị akwụkwọ were apụta.
Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyèrè Onowu Ebenebe, bụ Maazị Joe Nwegwu, nakwa onyeisi ọchịchị obodo ahụ, bụ Maazị Paul Nnatụ, nke ọ bụ odeakwụkwọ, bụ Maazị Charles Onyebụchi nọchitere anya ya, tinyere ndị ọzọ.
A nọrọ na ya bụ mmemme wee gbaa egwu ọdịnala dị iche iche, mee ihe ngosi, ma gbapekwa obere igbé ọba akwụkwọ ọhụụ, bụ nke akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche jupụtàrà n'ime ya, ma bụrụkwa nke e nyefèrè ndị Ebenebe site n'aka ọba akwụkwọ ala Nigeria.
Isiokwu mmemme ọgbakọ nkwàlite agụmakwụkwọ nke ahọ a bụ (ma a tụgharịa ya) "Agụmakwụkwọ: Akụrụngwa Ịkwàlite Ndị O Nweghị Ka Ọ Hà Ha."